#SaveSaman: Ezaka Farany Hamonjena An’i Saman Naseem Ao Iran Tsy Hovonoina Ho Faty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2015 12:11 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Türkçe, Español, Italiano, Ελληνικά, English
Nifamory maika ireo mpikatroka mafàna fo erantany mba hanakana ny famonoana ho faty kasain'ny governemanta hatao an'i Saman Naseem, ilay Iraniana 22 taona izay voasambotra tamin'ny dimy taona lasa fony izy mbola tsy feno tsy feno roapolo taona akory noho ny naha-mpikambana azy taminà vondrona mpanohitra mitam-piadiana.
Iran dia isan'ny nanao sonia ny Fifaneken'ny Firenena Mikambana momba ny zon'olombelona sy ny ankizy, ary lazain'ireo mpiasa amin'ny sehatry ny fiarovana ny zon'olombelona fa ny famonoana an'i Naseen dia fanitsakitsahan'i Iran ny andraikiny voafehin'io fifanarahana io.
Mandrara tsy misy adihevitra ny famonoana zaza tsy ampy taona ny lalàna iraisampirenena
Nanao antso ny Amnesty International mba hanaovana hetsika hanakanana ilay famonoana kasaina hatao anio Zoma 19 Febroary. Hassiba Hadj Sahraoui, tale lefitry ny Amnesty International any Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, nanazava hoe :
Tsy mampino ny hoe miomana ny hanatanteraka ny famonoana ho faty tovolahy iray ny manampahefana Iraniana, olona izay nampijaliana nandritry ny 97 andro mba ‘hibaboka’, fony izy vao 17 taona. ..Tokony hatsahatra avy hatrany ny famonoana an'i Saman ary averina dinihana tsara ny raharaha momba azy.
Ao anaty taratasy iray navoakan'ny Amnesty, nolazain'i Naseem fa henjana be ireo fepetra nitazonana azy :
Nandritry ny andro voalohany, mafy dia mafy ny fampijalina ka nahatonga ahy tsy ho afaka namindra akory. Mainty sy mangana ny vatako manontolo. Nahanton-dry zareo tamin'ny tànana sy tongotro nandritry ny ora maro aho. Notampenana ny masoko nandritry ny fotoana rehetra nakàna am-bavany sy nampijaliana ahy, ary tsy afaka nahita izay manampahefana nanadina sy nampijaly ahy. Naverimberin-dry zareo nolazaina ahy fa nosamboriny ireo fianakaviako, ka isan'izany ny raiko, ny reniko, ny rahalahiko. Nolazainy ahy fa hovonoin-dry zareo avy hatrany aho ary holaloriny simenitra ny fasako. Rehefa mba te-hatory aho nony alina, tsy avelan-dry zareo hiala sasatra aho fa anaovany kotaba amin'ny fampiasàna fitaovana isan-karazany, hatramin'ny fanakarapohana matetitetika ny varavarana. Efa teo amoron-tevan'ny fahaverezan-tsaina sy ny tsy fahatsiarovan-tena aho. Tsy nanana fifandraisana tamin'ireo fianakaviako aho nandritra io fotoana io. Nandritry ny fitsaràna indray; na ny mpitsara nitarika ny fotoana aza dia nandrahona ahy hokapohana misimisy kokoa ary nanaovana tsindry ny nanesorana ireo mpisolovava niaro ahy.
Misy fanentanana iray mandeha aty media sosialy, mampiasa ny tenifototra #SaveSaman mba hanamarihana ireo manampahefana Iraniana ao anatin'ilay fitarainana ho fampitsaharana ny famonoana ho faty an'i Naseem. Marobe ny mpampiasa Twitter no nanamarika ny @khamenei_ir, kaontin'i Ayatollah Seyed Ali Khamenei, Mpitarika Faratampony ao Iran.
Iran: Atsaharo ny famonoana an'i Saman Naseem & farano ny #Fanamelohana_ho_faty ny ankzy tsy ampy taona #SaveSaman
Nodarohana ny tontolo andron'ny Alahady mba hanerena azy ‘hibaboka’. Takio amin'i @khamenei_ir ny momba an'i #SaveSaman mialohan'ny famonoana azy afaka roa andro